Hery Rajaonarimampianina : « Firenena masi-mandidy i Madagasikara » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Firenena masi-mandidy i Madagasikara »
24/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manoloana ireo resaka mifamahofaho sy ny tsaho aely ary ny fanenjehana ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao mahakasika ny fifandraisana sy ny fitsidihana any ivelany, nitondrana fanazavana mahakasika izay indrindra ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ilay fandaharana “Fotoam-bita” isan-kerinandro amin’ny Youtube.
Tamin’izany indrindra no nanambarany fa ady hevitra no tsy maintsy atao amin’ireo mpamatsy vola vahiny sy ireo firenena vahiny, izay tsy maintsy ilaintsika. Tsy misy tokony hifanerena anefa izany, hoy izy, satria volantsika izany, isika no mamerina izany. Nambarany fa firenena tena sahirana no nekeny hoentina tamin’ny voalohany,ny taona 2014. “Hamehana ilàna vahaolana avokoa anefa, na ny toekarena na ny sosialy, nefa dia nijoro ny tenako noho ny fitiavan-tanindrazana”, hoy izy. Nohazavainy fa tao anatin’ny taona maro nifanesy, 70%-n’ny tetibolam-panjakana dia lany amin’ny fampandehanan-draharaha avokoa ka izay no mahatonga antsika mindram-bola amin’ireo mpamatsy vola mahazatra amin’ny fananganana ireo fotodrafitrasa isan-tsokajiny. Voalaza fa tsy maintsy mbola mindram-bola isika hanampiana ny tetibolam-panjakana isan-taona noho ny fatiantoka izay misy eo amin’ny vola mivoaka sy miditra ato anatiny.
Noho izay indrindra, nanambara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa “firenena masi-mandidy i Madagasikara”. “Tsy ny any ivelany no mibaiko antsika amin’ny fitantanana ny firenena ara-politika. Tsy hisy intsony izany fanaovana sonia Tondrozotra izany. Mifarana hatreo ny fibaikoana ny raharaham-pifidianana. Lalàna manan-kery eto Madagasikara no hampiharina fa tsy lalàna ahidina avy any ivelany”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Ankoatra izay, nasian’ny Filoham-pirenena resaka lavalava kosa ny mahakasika ny fiandrianam-pirenena amin’izao ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena amin’ny fahazoana ny faha-57 taonan’ny Fahaleovantena izao.
Araka izany, manentana ireo tsy mbola manangan-tsaina mba hanao izany an-kitsipo ny Filoha satria tsy ho an’ny Filoham-pirenena ny antony hananganan-tsaina fa ho an’ny firenena. Nambarany fa mariky ny fandalàna ny fiandrianam-pirenena izany fananganan-tsaina izany. Tsy vitan’izay ihany fa tafiditra amin’ny fiandrianam-pirenena ihany koa, hoy izy, ny fanovana ny lalàna mahakasika ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany satria ny 95%-n’ireo mpitrandraka dia mitady haka tombony fotsiny ihany. Izany dia ahafahantsika manana tahiry bebe kokoa mba hialana amin’ny fiankinan-doha tafahoatra. “Lehibe ny fahatsapan’ny Malagasy fa tompony izy fa tsy mpindrana. Manana ny fiandrianany amin’ny taniny izy ka noho izany manofa tany no azon’ny vahiny atao fa tsy manao barofo amin’ny fakana ny tanin’ny Malagasy”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Mahakasika ireo Nosy manodidina indray, nambaran’ny Filoha fa efa miasa ny kaomisiona manokana miadidy izany ary tafiditra ihany koa amin’ny ady amin’ny fiandrianam-pirenena izany. Fantatra ihany koa, hoy izy, fa misy halatra tsy ara-drariny ny fari-dranomasin’i Madagasikara ka mila harovana. Noho izay rehetra izay, manao antso avo amin’ny vahoaka ny Filoham-pirenena mba hifanotrona sy hifanome tanana amin’ireo fanamby goavana izay napetraka hitazonana hatrany ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena.
Tsy nohadinoin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina kosa ny nitsodrano ny Malagasy rehetra amin’ny hiatrehana ny fetim-pirenena.